घरेलु सौर बत्ती: विशेषताहरू र यसलाई कसरी बनाउने हरियो नवीकरणीय
यदि तपाइँ एक राम्रो चिल आउट शैलीको साथ बगैचा बनाउन चाहानुहुन्छ र त्यो पारिस्थितिक हो भने, यसलाई कसरी बनाउने भनेर सिक्न सल्लाह दिइन्छ। घरेलु सौर बत्ती। यो नवीकरणीय उर्जामा आधारित प्रकाशको एक प्रकार हो जुन तपाइँको शैलीमा पूर्ण रूपले सजावट गर्न सकिन्छ र विभिन्न प्रकारका संयोजनहरूमा धेरै राम्रोसँग अनुकूल गर्दछ।
यस लेखमा हामी तपाइँलाई घरको सौर्य बत्ती कसरी बनाउने र यसले के फाइदाहरू प्रदान गर्दछ भनेर जान्नुपर्ने सबै कुरा बताउन जाँदैछौं।
1 घरको सौर बत्ती के हो?
2 तपाइँको घरको सौर बत्ती कसरी बनाउने
2.2 होममेड सौर बत्तीलाई भेला गर्दै
घरको सौर बत्ती के हो?
बगैंचाको प्रकाश सजावटको लागि आवश्यक छ। विशेष गरी गर्मीको समयमा जब त्यहाँ रातीको बस्टिन्छ र परिवार डिनर हुन्छ। यो ज्ञात छ कि सबैभन्दा आधुनिक डिजाइनहरूलाई र color्ग संयोजनहरू आवश्यक हुन्छ जुन फूलहरूको प्रजाति र भित्ताहरूको रंगसँग मेल खान्छ। यस तरीकाले, हामी केवल प्रकाशको लागि फोकस स्थापना गर्न मात्र प्रबन्ध गर्दैनौं, तर हाम्रो बगैंचाको सजावट पनि बढाउछौं र प्रदूषित गर्दैनौं।
घर बनाइएको सौर बत्ती दिनमा सूर्यको उर्जासँग काम गर्दछ र रातमा उज्यालो गर्न पर्याप्त उर्जा छ। यो स्टोरमा किन्न सकिन्छ तर यदि हामी आफैंलाई यो बनायौं भने हामी घरको विभिन्न सजावट तत्वहरूमा राम्रो रूपान्तरण गर्न सक्दछौं। हामी विभिन्न चरणहरू सिकाउँदैछौं जुन तपाईंलाई तपाईंले आफ्नै घरको सौर बत्ती कसरी बनाउने भनेर जान्न आवश्यक पर्दछ।
तपाइँको घरको सौर बत्ती कसरी बनाउने
यदि तपाईंसँग यो तयारी गर्न थोरै समय छ भने, तपाईलाई केवल १ minutes मिनेट मात्र आवाश्यक हुन्छ सजीलै घर सजाउने सौर बत्ती बनाउनका लागि। सामान्यतया क्लासिक सौर टार्च बाह्यका लागि प्रयोग गरिन्छ। प्रयोग गरिएको जारहरू ती हुन् जुन प्राय: क्यानिंगको लागि प्रयोग गरिन्छ। यस तरीकाले, तिनीहरूले क्यानिंग जारहरू पुनः प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ जुन अब उपयोगी छैनन्। तपाईं कुनै पनि प्रकारको जार प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तर यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो एयरट्याटि,, कोलाप्सिबल हो र साइज सौर प्यानलको जस्तै छ।
बत्ती बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरू निम्न हुन्:
ढक्कन संग4जार
Solar सौर बत्तीहरू
१ कांच ग्राइन्डिंग स्प्रे को
एक फ्ल्याट हेड स्क्रू ड्राईभर
एउटा सानो फिलिप्स पेचकस (क्रूसिफार्म)
प्याकिंगको लागि चिपकने वाला टेप
हेरौं आवश्यक चरणहरू के हुन्:
यो प्रक्रियामा सजिलो बनाउन कोठामा जमेको भाँडामा पालेमा राख्नु राम्रो हुन्छ। यो कभरमा सिफारिस गरिएको छैन किनकि यसलाई पारदर्शी राख्नुपर्दछ त्यसैले सूर्यको किरण प्रवेश गर्न सक्दछ र बत्तीले ठीकसँग काम गर्दछ। तपाईंले स्प्रे लागू गर्नु पर्छ राम्रोसँग काम गर्न लगभग १ c सेन्टिमिटरको दूरीमा पीस गर्नुहोस्। यो बिस्तारै प्रयोग गर्नुपर्नेछ किनकि यदि यो लगातार गरिन्छ भने, सानो थोपा खडा हुन सक्छ। केहि अनुकूलन डिजाइनहरू बनाउन सकिन्छ, केहि अंशहरू फ्रोस्टेड र केहि पारदर्शी। यो डिजाईन बनाउनु अघि तपाईले एक चिपकने टेप प्रयोग गर्नुपर्नेछ र रक्सीको साथ सतह सफा गर्नुपर्दछ ताकि पीसको स्टिकहरू अझ राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकियोस्।
एक पटक यो सुख्खा भएपछि, टेप हटाईनेछ र तपाईंसँग तपाईंको अनुपम मोडेल हुनेछ। टॉर्चहरू बिच्छेदन गर्नका लागि तपाईले एल्युमिनियम फ्रेम हटाउनका लागि स्क्रु ड्राईभर प्रयोग गर्नुहुनेछ। केबलहरू केन्द्रमा हुन्छन् जतिञ्जेल सम्म तपाईले धैरै धक्का गर्नुहुन्न, तपाईले केहि पनि नोक्सान गर्नुहुन्न। जब तपाई बाहिर आउँनुहुन्छ जुन फ्रेमको आवरण हुन्छ तपाई धेरै दाग देख्न सक्नुहुन्छ जुन गोंदमा देखा पर्नेछ। यी दाग ​​एक प्रकारको सिलिकॉन हो जुन स्क्रूको टाउको ढाक्न प्रयोग गरिन्छ। तपाईंले यी दागहरू हटाउनु पर्दैन। मात्र तपाईंले स्क्रू हटाउनका लागि स्क्रूड्रिभर राख्नुपर्नेछ। एक पटक तपाईले इलेक्ट्रोनिक अंशलाई एल्युमिनियम फ्रेमबाट हटाउनु भएपछि, यसलाई पेस गर्नको लागि स्क्रूड्रिभर प्रयोग गर्नु आवश्यक छ।
होममेड सौर बत्तीलाई भेला गर्दै
बाँकी चीजहरूको अक्षुण्ण राख्न तपाईंले एल्युमिनियम फ्रेम कटौती गर्नु पर्छ। यसका लागि धन्यवाद, हामीले सबै केबलहरू ठीक गर्न बचत गरेका छौं। हामीले सुई नाक पिप्लसको साथ काट्नको लागि कैंची प्रयोग गर्नुपर्दछ। यी ट्वाँकाको साथ हामी चीजहरूलाई सही रूपमा राख्न धातुको झुकाउको ख्याल राख्छौं।
जब तपाईं आवास हटाउने समाप्त गर्नुहोस् तपाईं एउटा प्लास्टिकको बक्स देख्नुहुनेछ जुन ब्याट्री भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ। तपाईं पनि एक देख्नुहुनेछ सानो सर्किट बोर्ड, एक LED, सौर प्यानल र एक प्रकाश सेन्सर। यो प्रकाश सेन्सर हो जुन योसँग जोडिएको हुन्छ र अकस्मात् अचानक बाहिर आउँछ। सौर प्यानलले प्वालको प्वालमा प्वालको प्वालमा प्वाल पार्दै काम गर्दछ। सबै कुरा ठीकसँग राखिएको छ भनेर सुनिश्चित गर्न, हामीले ब्याट्री र सर्किट घुसाउनुपर्नेछ, यसलाई चिपकने टेप वा सिलिकॉनको साथ सुरक्षित गरेर। यस तरीकाले हामी यसलाई यसलाई राख्न पर्याप्त दबावको साथ परिचय गर्न सक्दछौं।
तपाईं प्रकाश फिल्टर प्रयोग गरी घरको सौर्य बत्तीको सजावट बढाउन सक्नुहुन्छ ताकि यसको रंग हुन्छ। उदाहरण को लागी, हामी जीवन बोतल लेबल फिल्टर प्रयोग गर्न सक्दछौं। यदि बोतल धेरै पारदर्शी छैन भने, यसले प्रकाश घटाउँदैन। तपाईं लगभग एक वर्ग काट्न सक्नुहुन्छ २. cm सेमी लेबलको र यसलाई चिपकने टेपको साथ टाँसिनुहोस्। यस तरिकाले हामी हाम्रो घरको सौर बत्तीको आकर्षण बढाउन बिभिन्न रंगहरू राख्ने प्रबन्ध गर्दछौं। किनाराहरू सँगै चिपकाइएको छ कि छैन भनेर पक्का गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ताकि सेतो लाइट फिल्टर नगरौं।
सौर्य बत्तीको अपरेसन राम्रोसँग बुझ्नको लागि हामी तपाईंको सिस्टम के हो भनेर हेर्न गइरहेका छौं। त्यहाँ केहि छ जुन सूर्यको सामना गरेर ऐनामा प्रणाली छन्। यो प्रणाली सूर्यको किरणहरू कब्जा गर्न र ध्यान केन्द्रित गर्न जिम्मेवार छ र तिनीहरूलाई सीधै प्रकाश पार्ने क्षेत्रमा प्रतिबिम्बित गर्दछ।
तिनीहरू प्राय: बगैचा र भित्री आँगनमा दुबै प्रयोग गरिन्छ। माथिको शीर्ष भाग ऐनामा छ जुन अनुहार प्रतिबिम्बित गर्ने र आँगनको दिशा निर्देशन गर्ने कार्यमा छ। त्यहाँ भित्र अन्य ऐनाहरू पनि हुन सक्छन्, आवश्यकता अनुसार। त्यहाँ केही सौर्य बत्तीहरू छन् जुन केहि बढी जटिल प्रणाली फाइबर अप्टिक्सले बनेको छ। उनीहरूसँग लेन्सहरू छन् जुन सूर्यको किरणका लागि समात्नेको रूपमा कार्य गर्दछ। यी बत्तीहरू १ 150० मिटरसम्मको क्षेत्र रोशनीको लागि निर्माण गरिन्छन् र अधिक कुशल प्रणालीहरू हुन्। यद्यपि यसको स्थापना लागत बढी छैन। यी सबै कारणहरूको लागि, यो तपाईंको आफ्नै सौर्य बत्ती बनाउन सल्लाह दिइन्छ किनभने यो तपाईले छानेको मोडेल हुनेछ र राम्रोसँग अनुकूलन हुनेछ।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईं घरेलु सौर बत्तीको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » ऊर्जा बचत » हरियो घर » घरेलु सौर बत्ती
विद्युतीय शक्ति गणना गर्नुहोस्